Start with F to J – HlaMin
Category: Start with F to J
Early Harvard Alumni
Update : November 18, 2021 U Ba Toke (Mathematics, GBNF)Served as Professor of Mathematics at RU and RIT; Rector at MASU Associate Dean at Assumption University U San Tha Aung (Physics, GBNF)Served as Director General, DHE Saw William Paw (MBA)Served as Professor and Head of Commerce Department U […]
Proud Protectors of Peace, Justice and Democracy Patriotic Forces trying to banish Terrorists Pledge to Restore Myanmar to Glory
Credit : Ko Thein (Tokyo) G Z တို့၏ အားမာန်။ ဒီနေ့ (၂၂-၃-၂၀၂၁ ) မနက်၈နာရီ မှ ာအစာငတ်ခံဆန္ဒ ပြပွဲ ၄၈နာရီပြည့်လို့ ပြီးမယ်။ ဒါနဲ့အိမ်က ၆နာရီကျော်လောက်ထွက်လိုက်သည်။ ဟို ရှီဘူယာ UN ရုံးရှေ့ရောက်သွားတော့ သူတို့လေးတွေ တဦးချင်း ရင်ဖွင့်စကားဆိုနေကြသည်။ ပြည်တွင်းကကြိုးစားပေးနေသော GZ တို့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မုှများစွာနှင့်။ UN၏ လုှပ်ရှားပေးနေမုှကို အားမရ။ ဂျပန်ကလည်း ဘာမှ ပြတ်ပြတ်သားသား ခြေလှမ်းမလာသေး။ ရင်ထဲမှာက ဗလောင်ဆူနေကြပြီ။ ဆုတောင်းနေကြရသည်မှာ အခါခါ။ အခု သူတို့၏လုှပ်ရှားပေးမုှကို အရာထင်လိုကြသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာ နှင့်ဂျပန်ပြည်သူအများ၏တောင်းဆိုလွှာလက် မှတ်ကောက်ခံရာ […]
CRPH CDM Strategic Protests Collect Evidence of Crimes Against Humanity
Dhamma Practitioner Core Adhamma Brainwashed Adhamma Selfish Opportunist
Update : October 14, 2021 Dr. Taing Oke (ChE69) Dr. Myo Khin (C70) Daw Winsome (Mya Nwe, C73) U Thein Ngwe (ChE75) U Win Myint (EC83)
Update : October 14, 2021 Thanks for providing information and corrections U Aye (M62, St. Patrick, FAO)Early classes in the 50s and 60sSports (e.g. Volleyball, Soccer) Daw Khin Than Nwe (T62)Details about Dr. Khin Maung Win (Met)NowaGreat Grand Mother Dr. San Lin (C62) Saya U Khin […]
Homonyms A cricket ball is THROWN to the AIR. The Prince of Wales is HEIR to the THRONE. Tongue Twister (Howadetective thwartedapick pocket) When he saw the pickpocket pick the pocket ofaman he picked the pocket of the pickpocket and put the […]